Akhri xog:-Mooshin lagu ridayo Dr. Gaas oo ka bilowday magaaladda Garoowe, yaa ka danbeeya? – Madal Furan
Hoy > Warka > Akhri xog:-Mooshin lagu ridayo Dr. Gaas oo ka bilowday magaaladda Garoowe, yaa ka danbeeya?
Akhri xog:-Mooshin lagu ridayo Dr. Gaas oo ka bilowday magaaladda Garoowe, yaa ka danbeeya?
Editor March 23, 2018 March 23, 2018 0
Garoowe (Madal Furan) – Warar ay Madal Furan ka heshay ilo lagu kalsoon yahay ayaa sheegaya in Xildhibaano tiradooda lagu qiyaasay 15 ay bilaabeen mooshin curdun ah oo ay ku abaabulayaan in xilka looga qaado Madaxweynaha Dowlad Goboleedka Puntland Dr. C/weli Maxamed Cali Gaas.
Warku wuxuu intaas ku darayaa in arrintani ay ka dhalatay kadib markii Golaha Wasiiradda Puntland ay ku kala jabeen mooshin laga soo abaabulay Madaxtooyadda Puntland oo lagu doonayey in looga horyimaado go’aankii Golayaasha Baarlamaanka DFS ay dalka kaga mamnuuceen shirkadda DP World gudaha waddanka Soomaaliya.
Dadka siyaasaddaha fallanqeeya ayaa rumeysan in gudaha maamulka Puntland uu ka iftiimayo xarig-jiidkau dhexeeya dowladdaha Imaaraadka Carabta iyo Qadar ee sida adag ugu loolamaya gacan ku haynta siyaasadda Waddanka Soomaaliya.
Dowladda Imaaraadka Carabta ayaa dooneysa inay tiirar adag ka dhigato Hogaamiyayaasha Somaliland, Puntland iyo dhamaan Maamuladda ka jira gobolada Soomaaliya, si aysan u dhicin meel amrinta go’aanka dalka looga saarayo shirkadda DP World.
Arrintan ayaa noqoneysa siyaasadda ay Somaliland iyo Puntland uu dagaal ugu dhex mari la’yahay deegaanka Tuka Raq ee horaantii bishii Feberaayo laga qabsaday Maamulka Puntland oo halkaasii u aheyd Kastam dhaqaale uga soo xeroodo.
Iyadoo wakhtigan ay ka taagan tahay magaaladda Muqdisho muran siyaasadeed oo ragaadiyey Golaha Sharci dejinta iyo Xukuumadda Kheyre, murankaasoo sababay inuu is-dhimo xawligii dheeraa ee ay ku socotay Dowladda Federaalka Soomaaliya ayaa dalka Imaaraadka Carabtu u arkaa fursad qaali ah oo lagu burburin karo Dowladda Farmaajo, si markaas ka dib ay u suurto gasho siyaasiyiin u dhega nugul inay majaraha u qabtaan hogaanka DFS.
Herddenka siyaasadeed, ee ka socda magaaladda Muqdisho ayaa u muuqda mid ku soo fidaya Maamuladda Goboladda iyadoo markii markii ugu horeysay ay dowaldda Qadar ka soo dhex muuqatay siyaasadda Puntland ee looga hortegayo socodsiinta mooshinka ay Xukuumadda Puntland ku dooneyso inay ku gacan siiso dalka Imaaraadka Carabta.
Nin ka mid ah Xildhibaano ka tirsan Puntland oo dhowaan tegay magaaladda Muqdisho ayaa lagu soo waramayaa inuu horkacayo mooshinka xil ka qaadista ee Madaxweynaha Puntland Dr. Gaas, kaasoo la sheegay inuu xiriir dhow la yeeshay kooxaha siyaasadoodu ku tiirsan tahay dowladda Qadar ee fadhigoodu yahay magaaladda Muqdisho.
Dr. Gaas ayaa waxaa maamulkiisa ruxayaan caqabaddo fara badan oo ay ugu weyn tahay qadiyadda tuuladda Tuka Raq, heshiiska shirkadda P&O ee dekdda magaaladda Boosaaso mudada 30ka sanadood ah loogu wareejiyey iyo dhibaatada ay ganacsatadu kala kulmeen gaadiidka ay xamuulka u adeegsadaan.
Waxaa kaloo Maamulka C/weli si weyn loogu dhaliilay ku dhaqan la’aanta miisaaniyadda Puntland u degsan oo looga cabanayo in maamulkiisu uu ku guul darreystay bixinta mushaharka Ciidamada iyo Hay’adaha dowliga ah mudo bilooyin ah oo ka soo bilaabata sanadkii ugu horeeyey ee kursiga ku fariistay.
Maamulka Madaxweyne Gaas ayaa sidoo kale lagu eedeeyey inuu ku fashilmay ballanqaadyo fara badan oo ay ugu weyn tahay inuu doorasho cod iyo qof ah gaarsiin doono Puntland sanadka 2019-ka.
Ugugdanbeyntii, iyadoo mudo bilo fara ku tiris ahi ka dhiman yihiin wakhtigii uu Dr. Gaas sii maamuli lahaa deegaamada Puntland ayaa waxaa xiligan soo wajahaya mowjado siyaasadeed oo kaga soo burqanaya gudaha maamulkiisa, Dowladda Federaalka iyo Dowladda Qadar oo siyaasad ahaan ku sii baahaysa gudaha dalka Soomaaliya.
Haweenay markii u horraysay hoggaanka u qabatay CIA
Raysal Wasaaraha Soomaaliya oo magaaladda Baydhabo u tegay ka qaybgalka shirka Amniga Qaranka
Madaxweyne Farmaajo oo Sanitor Qaybdiid u sheegay in sharci adag lagu qaadi doono cid walba oo ka danbeysay weerarkii gurigiisa